ရန်ကုန် အော်တင်ဇင်ကျောင်းက ကလေး နှိက်စက်ခံရမှု
4 ธ.ค. 2562 - 22:47 น.
ရန်ကုန်မြို့က အထူး‌စောင့်‌ရှောက်မှု လိုအပ်‌တဲ့က‌လေးများ ပုဂ္ဂလိက လေ့ကျင့်ရေး ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ စကားမပြောနိုင်တဲ့ ၁၀ နှစ်အရွယ် အော်တစ်ဇင် ကလေးငယ်တစ်ဦးကို ရိုက်နှက်နှိက်စက်မှုနဲ့ အဲဒီ့ ကျောင်းက ဆရာ နှစ်ယောက်ကို ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့မရဲစခန်းမှာ မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မနဲ့ အမှုဖွင့် ထားတယ်လို့ ကလေးရဲ့မိခင် ဒေါ်ခန့်ခန့်ဝင်းရွှေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ရဲစခန်းမှာ မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၃ (က) နဲ့ အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီး အဲဒီဆရာနှစ်ယောက်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂ရက်နေ့မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ က အာမခံနဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီအမှုကို လူ့အခွင်ရေးကော်မရှင်ကိုလည်း တိုင်ကြားထားလို့ လူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင်က စစ်ဆေးပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနတွေ ကို အစီရင်ခံစာပို့ ထားလိုက်ပြီလို့လည်း အမျိုးသားလူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင်က အတည်ပြုပါတယ်။
ကလေးရဲ့မိခင်ဟာ အဲဒီ့ကျောင်းမှာ အော်တစ်ဇင် ကလေးငယ်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက် ကတည်းက ကျောင်းထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျောင်းလခ တစ်လကို နှစ်သိန်း ရှစ်သောင်း ကျပ် ဝန်းကျင် ပေးရတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ကလေးကို ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်မှုဟာ အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်၊ ကျောင်းက အပြန် မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာ ညိုမည်း ဒဏ်ရာ ရလာတာကြောင့် သိရှိခဲ့ပြီး နောက်တနေ့ မှာ စီစီတီဗီကို ပြန်ကြည့်ရာကနေ တွေ့ခဲ့တာလို့လည်း ကလေးရဲ့မိခင် ဒေါ်ခန့်ခန့်ဝင်းရွှေက ပြောပါတယ်။
ကလေးရဲ့မိခင်ရဲ့ အပြောအရ ကျောင်းစာသင်ချိန်အတွင်းမှာ ထမင်းပန်းကန်မှောက်တာကနေ စပြီး သင်တန်းကျောင်းက ဆရာက ထိုးကြိတ်တာကို ကျောင်းရဲ့ စီစီတီဗီကနေ တွေ့ရတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
ကလေးဟာ အခုအခါ အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး အဲဒီ လေ့ကျင့်သင်ကြား‌‌ရေးကျောင်း(Therapeutic Training Center) မှာ၂ နှစ်အရွယ်က စတင်ပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီကျောင်းမှာ ကျောင်းသားအဖြစ် ၈ နှစ် နီးပါး လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ သူ့မိခင်က ပြောပါတယ်။
ဆရာတွေဟာ ကလေးကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ CCTV camera မြင်ကွင်းကွယ်ရာကို ခေါ်ပြီးမှ စကားမပြောဆိုနိုင်သူ( Non - Verbal Autism)ကလေးကို အကြိမ်ကြိမ် ထိုးနှက် ကန်ကျောက်ခဲ့တယ်လို့လည်း ကလေးမိခင်က ပြောပါတယ်။
လေ့ကျင့်သင်ကြား‌‌ရေးကျောင်း(Therapeutic Training Center)ဘက်ကို ဘီဘီစီက ဆက်သွယ်ပေမယ့် ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့ပါဘူး ။
ဘီဘီစီက ကြည့်ရတဲ့ စီစီတီဗီမှာတော့ ဆရာလို့ ယူဆရတဲ့ ယူနှီဖောင်းဝတ် တစ်ယောက်က ကလေးကို ဒူးနဲ့ ပြေးတိုက်တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီကျောင်းဟာ အော်တစ်ဇင် ကလေးတွေ လာတက် ကြတဲ့ ကျောင်းဖြစ်တော့ အော်တက်ဇင် ကလေးတွေ ရဲ့ မိခင်တွေကလည်း စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိပါတယ်။
ကျောင်းဘက်ကတော့ ဒီဆရာတွေကို အလုပ်ထုတ်ထားတယ်လို့ ပြောပြီး ကလေးမိခင်ကျေနပ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လို့ ပြောတယ်လို့ လည်း ဒေါ်ခန့်ခန့်ဝင်းရွှေက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကလေးမိခင်တောင်းထားတဲ့ စီစီတီဗီ မှတ်တမ်း တစ်လစာ ကိုတော့ ကျောင်းဘက် က မပေးသေးဘူးလို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
ကလေးမိခင်ကတော့ သူကလေးဟာ စကားအပြောနိုင်တဲ့ အော်တစ်ဇင် ကလေးဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုကလေးတွေဟာ ဆက်သွယ်ဖို့ ခက်ခဲသူ၊ အမိန့်ပေးဖို့ခက်ခဲတဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်တာဟာ အခုမှ ဖြစ်တဲ့ပုံမဟုတ်ဘဲ အရင်ကတည်းက ဖြစ်နေတယ်လို့ ကလေးမိခင်က ယူဆမှုတွေရှိလို့ စီစီတီဗီ မှတ်တမ်း တစ်လစာကို စာနဲ့တင်ပြပြီး တောင်းတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူကရှင်းပြပါတယ်။
ကလေးမိခင် ကတော့ သူကလေးဟာ ၂၀၁၂ ကနေ ၂၀၁၇ ထိ ကာလမှာ တိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ကာလတွေမှာ အမူအယာတွေပြောင်းပြီး ရန်လိုလာတာကြောင့် ကျောင်းမှာ ဘယ်အချိန်ထဲကစပြီး နှိပ်စက်ခံနေ ရသလဲဆိုတာ သိလိုတဲ့ အတွက် အခုလို တောင်းတာလို့လည်း ပြောပါတယ်။
ရဲစခန်းကတော့ ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သက်သေ ဓာတ်ပုံတွေ တောင်းထားတယ်၊ ကလေးကို အော်တစ်ဇင်ဖြစ်ကြောင်း စိတ်ရောဂါ အထူးကုဆေးရုံကနေ ထောက်ခံစာတောင်းထားလို့ အဲဒါ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း ဒေါ်ခန့်ခန့်ဝင်းရွှေက ပြောပါတယ်။
အခုအမှုဖွင့်ထားတဲ့ပုဒ်မ ၁၀၃ ဟာ မသန်စွမ်းကလေးငယ်တွေကို နိုင်ထက်စီးနင်း အလွဲသုံးခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခြင်း တို့ဟာ ပြစ်မှုထင်ရှားရင် အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ်ရှစ်လကနေ ၅နှစ်အထိ ကျခံရနိုင်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရန်ကုန် အော်တင်ဇင်ကျောင်းက ကလေး နှိက်စက်ခံရမှု